नबिल बैंकले ल्यायो 'नयाँ लुगा' नामको संवेशमूल आत्मकथासहितको दशैं भिडियो ! - लोकसंवाद
नबिल बैंकले ल्यायो 'नयाँ लुगा' नामको संवेशमूल आत्मकथासहितको दशैं भिडियो !
काठमाडौँ । नबिल बैंकले गत वर्ष तयार पारेको दशैं भिडियोको अपार सफलता पश्चात् यो वर्ष पनि 'नयाँ लुगा' नामक दशैंको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । यस नयाँ भिडियो नेपालीहरुको महान चाड दशै मनाउन शहरमा बसोबास गर्ने र दशैं मनाउन गाउँ फर्कने कथामा आधारित छ, यो कथा आम नेपालीहरुको आत्मकथा पनि हो ।
भिडियोमा एक जना बाबा शहरमा जागिर गर्दछन, घरबाट छोरीको फोन आउँदछ, दशैंमा नयाँ कपडा ल्याइदिनु भनेर र उनी छोरी एवं श्रीमतीको खुशीका निम्ती दशैं किनमेल गरेर गाउँ फर्किन्छन् । फर्किदा, बाटो बिग्रेर जाममा पर्दछ तर परिवारको माया अनी खुशीको लागि उनी रात भरी हिंडेर गाउ पुग्दछन् । यो कथालाई भिडियोमा निकै मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको नबिल बैंकले जनाएकाे छ ।
यसैगरी दशैंको यस भिडियोले सकभर दशैंमा आफ्नो परिवारसँग भेटि सुरक्षित साथ खुशी साटासाट गरौँ भन्ने सन्देश सरल ढंगले दिएको छ, जसले पहिले जस्तै सबैको मन जित्नेछ भन्ने अपेक्षा समेत लिएको छ ।
भिडियो हेर्न लिंकहरुमा किल्क गरेर हेर्न सकिने जनाइएकाे छ ।
फेसबूक : https://fb.watch/8ypXHXNZVl/
इन्स्टाग्राम : https://www.instagram.com/tv/CUxS6wZhiES/?utm_source=ig_web_copy_link
युटुब : https://youtu.be/p8zsDtiJwDY